Abaphila cindezela. umzimba
Ngaphezu umphumela zangaphandle, oqeqeshwe kahle imisipha besisu ukuqinisekisa isikhundla efanele ngalo ingaphakathi lesisu, futhi nethonya elizuzisa udumo ngomsebenzi wabo. cindezela Namandla kuthuthukisa ukuma futhi ivikela aphansi njengoba ebuya ekulimaleni.
Umsebenzi cindezela akuyona kuphela ukuqinisa imisipha, kodwa futhi sleeves fat ngokweqile, uma ikhona. Endaweni ukususa amanoni kungenzeki esiswini, ngakho ukuzivocavoca ngokuba isikhamo sewayini kumele kuhlanganiswe cardio, ukuqeda isisindo okweqile iyonke. Uma enze izivivinyo kuphela, ngokuqinisekile cindezela luyoqina futhi bakwazi ukubhekana nokuhlupheka, kodwa namanje ivaliwe ungqimba fat.
Yiziphi engcono besisu umzimba? Ziningi umzimba sokuba imisipha esiswini, kodwa zonke ubilise phansi ezimbili ongakhetha, kuye ngokuthi yini ingxenye isidingo esiswini ukumpompa. Lokhu umlenze Uphakamisa - I- press aphansi nezinkinga umzimba - kuya phezulu. Igobolondo main ukusebenza phezu imisipha besisu - ebhentshini.
Ukuze uthole cindezela ezinhle, umzimba okufanele kwenziwe nsuku zonke futhi ayikwazi uphonsa izikhathi. Isikhathi esingcono kakhulu ukuzivocavoca - ekuseni.
Isibalo ukuzilolonga kanye ijubane ekusetshenzisweni kwazo kuncike injongo - noma nje ufuna ukuba nokhalo oluncane noma nobulukhuni edingekayo lamatshe omazisayo eziyisithupha-pack.
Esimweni sokuqala, udinga ukwenza umzimba aphosekile wenze rep ngaphezulu. Kufanele silinganisela carbohydrate kanye amafutha.
ezinye izindlela ezidingekayo ukuthola impumuzo amahle - okungukuthi, umthwalo esiphezulu, inani ezinikezwa-10, i-lonwabu.
Uma udinga nje flat besisu umzimba zimi kanje.
Ukusebenzisa kuqala. Wenziwa sidindilize, imilenze bent emadolweni futhi ivikelekile, izithende aseduze ezinqeni. Izandla ngemuva castle ukugcina amakhanda abo. Izindololwane kumele bazame ukufinyelela ngamadolo. Ukuze ukufunda imisipha lateral - zama uthole it right indololwane kwesokunxele nedolo kwesokunxele indololwane - kwesokudla. Ingabe usebenzise kakhulu ngendlela aphosekile ngoba rep 30 zombili izinguqulo.
Eyesibili umsebenzi. Isikhundla - amanga. Phakamisa kokubili imilenze nezingalo. Zama uthole izandla zakho izinzwane. Ingabe fast kakhulu okungenani 20 izikhathi. Siqondiswe ikakhulukazi ukuqinisa cindezela aphansi.
Ukusebenzisa lwesithathu. Ukuqala isikhundla - ulele phansi, imilenze ibheke emadolweni, izinyawo - phansi, izandla - enqabeni ekhanda. Kancane ukhipha emuva engenhla phansi. Ukuze wenze izikhathi ezingu-20.
Kulabo abafuna ukuthola impumuzo ngempumelelo, kunezinye izindlela kanye umzimba. Cindezela cubes - akuwona neze umsebenzi olula, kodwa umphumela incike isakhiwo of izici ngamunye. Abaningi nabezindaba kufihliwe ngaphansi ungqimba lwamafutha. Kulokhu, kufanele zifakwe ukuqeqeshwa ukugijima, ukuhamba ngebhayisikili nezinye kardiozanyatiya.
Uma udinga cindezela impumuzo, umzimba kufanele kwenziwe kancane hhayi nsuku zonke. Engingakusho nje ukuba ufundelwe kathathu ngesonto.
Ukusebenzisa kuqala. Okwenziwe sidindilize, ngezandla zakhe ibekwe ngaphansi izibunu. Kuyadingeka ukukhulisa imilenze ukuze ime mpo bese ngihlaliswa phansi, hhayi kuze kufike phezulu emkhawulweni ngaphandle impumelelo. Ukuzivocavoca kuhloswe ngazo ukuqinisa esiswini ephansi. Le ndawo kudinga ukuqeqeshwa isikhathi eside futhi kanzima. A umsebenzi ofanayo kungenziwa kubha. Ingabe ezintathu amasethi 10 ezinikezwa.
Eyesibili umsebenzi. Yenza sidindilize, ngezandla zakhe - inhloko enqabeni. Kanyekanye phakamisa emuva yakho bese ukuguqa yakho ukuze izindololwane awakuthinti emadolweni. Uma uthinta imisipha besisu kufanele welulela ngangokunokwenzeka. Ukuze ukufunda imisipha etshekile ukuzivocavoca ufuna ukushintsha, ukuthi, endololwaneni ilungelo uthinte kwedolo kwesokunxele bese indololwane kwesokunxele - kwesokudla. Ingabe ezintathu amasethi 10 ezinikezwa.
Ukusebenzisa lwesithathu. I Vise kubha ukuthi siphakamise izinyawo nendawo bese uzama ukugcina kwabo isikhashana kulesi sikhundla amandla cindezela.
Ukusebenzisa lesine. It is ezenziwe elele emhlane wakho, imilenze bent emadolweni, izinyawo phansi, izandla ngemuva ekhanda lakhe. Une ukuthatha emuva phansi, kuyilapho okwenza umoya kancane. Yenza ezintathu amasethi 10 ezinikezwa.
Phakathi amasethi kuyadingeka ukwenza ikhefu imizuzwana engu-30.
Ngakho, indlela ekhiphela up ngabezindaba? Ukuzivocavoca, ukuqeqeshwa cardio, ukudla ukudla okunomsoco, ukuzivocavoca njalo futhi zingapheli amandla.
Ingabe Ngidinga thwebula umphathi umsebenzisi zanamuhla?